Ugu Weyn Ee Clematis
Xannaanaynta, daryeelka iyo dhalmo ee clematis ee dalka
Si aad u qurxiso agagaarka magaalada banaankeeda leh ubaxyo quruxsan oo leh waqti dheer ubaxyo oo la isku xidhan karo, ayaa la joojin karaa doorashada clematis. Sida loo koro clematis, waxaan hoos ku sharaxnaa. Doorashada meel loogu beero beerashada Clematis ubax markii beeray dhul furan waxay u baahan tahay doorashada saxda ah ee meel, sababtoo ah xaalad kale waxay noqon doontaa adigu si ay u gaaraan ubax dhalaalaya.
Kala saarista habka clematis abuurka
Kaliya gudaha Antarctica weli ma clematis ka qoyska family rununculus. Laakiin beeritaanka clematis ee beerta, sidaas darteed in ubax, dhirta quruxsan-fiirinta dhirta laga korayo miraha, waa wax awood u leh xataa xitaa florist bilowgii. Bilowga, waa inaad doorataa inta u dhaxeysa cawska, geedo yar yar iyo geedo clematis, kuwaas oo intooda badan ka tirsan kooxda geedka canabka ah.
Liiska ubaxyada dilka ah ee ubaxyada laga bilaabo guga hore ilaa dayrta goor dambe
Ubaxyo badan oo beerta ah ayaa leh faa'iido cad oo la barbardhigo sannadlaha: uma baahnid inaad beerato sannad walba, waxay leeyihiin saamayn firfircoon oo ugu dambeyntii, dooranaya dhirta saxda ah, waxaad ku guuleysan kartaa ma aha oo keliya midabada midabka oo fiican, laakiin sidoo kale ubax beertaada laga bilaabo xilliga guga dayrta dambe.
Farsamayaasha muuqaalka badanaaba waxay isticmaalaan dhirta fuulaya inay qurxiyaan beerta iyo goobaha kala duwan. Waxay leeyihiin sifooyin sare oo lagu qurxiyo waxayna awoodaan inay si weyn u soo nooleeyaan oo u qurxiyaan aagga deegaanka. Ma taqaanaa? Canab yaryar, oo aan si aan dhammeystir lahayn u daryeeli karin, waxay awood u leeyihiin inay samaystaan ​​qulub cufan oo ku yaal dhammaan dhinacyada toosan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Clematis 2019